Nagu saabsan | Jiangsu Kaichuang International Trade Co., Ltd.
Jiangsu Kaichuang International Trade Co., Ltd., waxay u shaqeysaa sidii shirkad iska leh gebi ahaanba shirkadda Jiangsu Kaihua Aluminium Co., Ltd. iyo Jiangsu Kaile Metal Technology Co., Ltd. Qalabkeena ugu weyn ee soo saarista hadda waa: Quenching line-ka wax soo saarka ee taarikada khafiifka ah; Deminta khadka wax soo saarka ee taarikada qaro weyn; Khadka annealing ee joogtada ah; Mashiinka qurxinta; Mashiinka toosinta; Sax mashiinka arkay; Mashiinka xiirashada; Foornada gabowga, iwm Waxaan ku takhasusnay bixinta 1xxx, 2xxx, 3xxx, 5xxx, 6xxx, 7xxx alaabooyin taxane ah oo soosaar sanadle ah oo dhan 100,000 tan. Kaichuang oo ah mid ka mid ah kuwa ugu xirfada badan soo saareyaasha iyo ganacsatada biraha aan birta ahayn ee Shiinaha, Kaichuang waxay inta badan ku hawlan tahay dhoofinta saxan aluminium, saxan alwaax dahaadhsan, saxan damin, aluminium isku duubni, xarig, tubbo, bireed, bar, aluminium, bir kala duwan waxyaabaha iyo alaabada la xidhiidha.
Si ballaaran ayaa loo adeegsaday gawaarida iyo maraakiibta wax soo saarka, gaadiidka, qurxinta qaab dhismeedka, elektaroonigga, makaanikada, iwm. Kadib khariidad istiraatiiji ah oo muddo dheer socotey iyo suuq caalami ah oo sahaminta, saamigeena suuqyada caalamiga ah ayaa si xawli ah ugu sii fidayey iyadoo lagu saleynayo hubinta alaabada tayada. hagaajinta iyo hal-abuurnimada aluminium aluminium habka daaweynta kuleylka. Kordhinta joogtada ah si loo hagaajiyo waxqabadka iyo aluminium aluminium process.Provide wax soo saarka aluminium ee ugu fiican tayada macaamiisha.stability.Our alaabada ayaa loo dhoofiyey Waqooyiga Ameerika, Yurub, Koonfur-bari Aasiya, Bariga Dhexe iyo suuqyada kale ee dibada. Waxaan la dhisnay xiriir ganacsi oo wanaagsan in ka badan 120 dal iyo gobol.
Jiangsu Kaihua Aluminium Co., Ltd., waxaa la aasaasay sanadkii 2009. Lahaanshaha qalabka waxsoosaarka horumarsan sida milkiilaha rooga qabow, foornada kululeeyaha, sax sax ah, saxanka khafiifka ah ee waxsoosaarka waxsoosaarka iwm Waxyaabahayagu waxay daboolayaan qeexitaano kala duwan iyo moodooyinka taarikada aluminium ee sagxadda ah iyo shaashadda leh, shan baarka weyn oo shaashadda saxan aluminium, saxan aluminium ah oo shaashad shaashad yar leh, saxan aluminium dheecan ah, iyo saxan aluminium lentil iwm, waxayna leeyihiin awood lagu qaabeeyo iyadoo loo eegayo tirada iyo cabbirka. Shirkadeena waxay ku guuleysatay cinwaanada "Jiangsu High-tech Enterprise", "Jiangsu Private Technology Enterprise", "Jiangsu Province Science and Technology Innovation Advanced Unit", "Xuzhou Advanced Collective", "Xuzhou Industrial Park Technology Innovation Enterprise", iwm. Waxaan u qalannaa shirkadda weyn ee warshadaha aluminium ee Shiinaha.
Qalabkayaga wax soo saarka
Habka tijaabada wax soo saarka, waxaan u abaabulnaa baaritaanka wax soo saarka iyadoo la raacayo heerarka caalamiga ah. Iyadoo loo marayo hubinta taxaddarka adag ee wax soo saarka habraac kasta oo is-kormeerkiisa, hubinta wadajirka ah iyo dhammeystirka kormeerka, kormeerka alaabada dhammaatay, Waxaan hubineynaa in qayb kasta oo ka mid ah alaabooyinka Kaihua ay yihiin kuwo lagu kalsoonaan karo.
Bandhigga alaabta keydka
Waxaan haynaa qaddar tiro badan oo alaab ah
Shirkaddu waxay si dhow ula shaqaysaa machadyada cilmi-baarista, warshadaha, jaamacadaha iyo machadyada cilmi-baarista si ay si madax-bannaan u horumariyaan. Dhameystiray khadka soo saarista deminta joogtada ah ee duudduuban dhammaan saxannada khafiifka ah, iyo daminta saxanka qaro weyn ee khadka Wax soosaarka Foornada, isla waqtigaas shirkaddu waxay leedahay qalab toosan oo heer sare ah oo dheellitiran, foornada gabowday, aragtida saxda ah, qalabka daaweynta dusha sare , sameynta laga bilaabo daaweynta kuleylka xalka ilaa shaashadda dusha sare. Multiple noocyada khadadka wax-soo-saarka ee xoqidda iyo xoqidda, ayaa si guul leh loogu gudbiyay "shahaadada nidaamka maaraynta tayada caalamiga ah ee" ISO9001: 2008, alaabooyinka waxaa si ballaaran loogu adeegsadaa gawaarida, maraakiibta, duulista. Meelaha warshadaha badan. , korantada, caaryada, iwm, waxay daboolayaan baahiyaha warshado kala duwan oo loogu talagalay aluminium aluminium ah oo aad u sarreeya.
Xirmooyinka dhoofinta badaha ee caadiga ah, oo leh warqad isku dhafan iyo ilaalinta caagagga xaashida. Ugu dambeyntiina taarikada aluminium waxaa lagu dhejiyaa santuuqa alwaax. Guud ahaan marka la hadlayo, waxaa jira qiyaastii 2 tan oo ku jira hal xirmo.16-20MT waxaa lagu ridi karaa 20 'weel, 21-24MT ayaa ku habboon 40 weel.
SOO SAARKA QALABKA
U hogaansanaanta "qanacsanaanta macaamilka oo ah diiradda, hagaajinta tayada joogtada ah, raacdada tayada heer sare" siyaasada tayada.Soo xoojinta waxsoosaarka wax soo saarka iyo habab kormeer ah. Ku foog fiirso hagaajinta tartanka asaasiga ah ee shirkadaha. Kormeerka wax soosaarka Iyadoo si adag loo waafajinayo heerarka tayada qaranka. Iyada oo loo marayo xakamaynta qadka wax soo saarka, nidaam kasta is-kormeerkiisa, hubinta wadajirka ah iyo kormeerka nus dhammaadka ah, kormeerka alaabooyinka dhammeeyey si loo hubiyo in badeecad waliba ay tahay mid la isku halleyn karo oo tayo sare leh.Win sumcadda laga helo macaamiisha iyo suuqa Hogaamiyaha warshadaha qaranka ee aluminiumka si guul leh ayuu udhameystiray khadka waxsoosaarka deminta joogtada ah ee xirmada xaashida iyo saxanka qaro weyn ee foornada diiran Isla mar ahaantaana, shirkadeena waxay leedahay dhowr qalab oo toosan oo horumarsan, foornada gabowday, saxanka saxda ah iyo qalabka daaweynta dusha sare. Abuuritaanka khadka wax soo saarka ee ka soo baxa xal kuleylka xalka adag ee sawirka dusha sare, nadiifinta iyo filimka.Waxaan si guul leh ugu gudubnay "shahaadada nidaamka maaraynta tayada caalamiga ah ee ISO9001: 2008, alaabooyinkana waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa dhinacyo badan oo warshadeed sida gawaarida, maraakiibta duulista, elektaroniga, wasakhda, iwm, waxay daboolaan baahida loo qabo aluminium-awood sare leh ee warshado kala duwan.
Shirkadeena waxaa ka go'an inay siiso macaamiisha wax soo saar iyo adeegyo ka wanaagsan, waxay diiradda saareysaa hal-abuurnimada tikniyoolajiyadda iyo tababarka shaqaalaha, waxay fiiro gaar ah u leedahay qaabeynta iyo horumarinta alaabooyinka cusub. Ku tiirsanaanta ilaha farsamada ee adag, tayada badeecada aad uwanaagsan, xakamaynta tayada adag iyo suuq geynta heerka koowaad iyo adeegyada iibka kadib, anaga, Jiangsu Kaichuang International Trade Co., Ltd., waxaan si niyad sami ah u rajeyneynaa wada shaqeyn guul-wadaag ah!
daawaha aluminium 6061 qiimaha, Tread Tread Aluminum Aluminium, Waraaqaha Aluminium ee jaban, Alaab-qeybiyeyaasha Birta ah ee Anodized Aluminium, 7050 sheet aluminium, qiimaha aluminium jeeg jeeg,